Xidigaha Ay Ka Eeganayan Suuqa, Arrimaha Navas Iyo De Gea & Florentino Perez Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Kooxda. - Laacib.net
Xidigaha Ay Ka Eeganayan Suuqa, Arrimaha Navas Iyo De Gea & Florentino Perez Oo Ka Warbixiyay Xaaladda Kooxda.
Real Madrid ayaa sameyn doonta saxiixyo Glatico ah sidii looga bartay waqti walba oo ay dhacdo doorasho gaar ahaan marka la doorto Florentino Perez, shalay ayeyna aheyd markii loo caleemo saaray inuu markii shanaad hogaamiyo Los Blancos afarta sano ee soo aadan.
Florentino Perez wuxuu fuulay markii shanaad shalay masraxa madaxweyne ee Real Madrid isagoo hadalo kooban ka jeediyay, balse sidoo kale wuxuu ka hadlay siyaasadda kooxda ee suuqa kala iibsiga, Onda Cero ayuu uga waramay xidgiaha ay isha ku hayaan arimahooda.
Florentino wuxuu qiray in Zidane uu wax badan eeganayay Kylian Mbappe halka sidoo kalana ay isha ku hayaan goolhayaha da’da yar ee reer talyaani Gianluigi Donnarumma.
Weeraryahanka 18-jirka ah ee reer France wuxuu Monaco u sheegay inuu Real Madrid aadayo hadii uu tagayo halka Gianluigi Donnarumma uu isna diiday inuu heshiiska u kordhiyo Ac Milan.
“Waan daawaneynaa” ayuu yiri Perez oo ay idaacadda Onda Cero wax ka weydiisay sida ay u arkaan goolhaye Gianluigi Donnarumma.
“Zidane wuxuu eeganayay xidigaan tan iyo 16-jirkiisii, Zidane aad ayuu u jecel yahay” ayuu mar kale yiri Perez isagoo ka hadlayay Kylian Mbappe.
“Mbappe wuxuu leeyahay hab fiican, waana la hubaa inuu noqon doono xidig weyn, dabcan isagana waan la soconaa”
Ugu dambeyntiina Florentino Perez wuxuu ka hadlay arinta goolhaye David De Gea iyo sida ay hadda u aamineen Keylor Navas.
“Lama aanan hadlin De Gea, laba sanadood ka hor waxaan ka laheyn arin, balse ma dhicin”
“Ciyaartoyda waxey si daran u jeclaadeen Keylor, sidoo kale tababaraha, anigana waan jeclahay Keylor” ayuu hadalkiis sii raaciyay Perez.
“Waan doonayay De Gea sababtoo ah waxba kama aqoonin Keylor Navas”